ယာဉ်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် Toyota ကုမ္ပဏီမှ US ထုတ် RAV4 ကား 760,000 ကျော်၊ Lexus HS 250h ကား 18,000 ကျော် ကို ပြန်လည်အပ်နှံရန်ခေါ်ယူခြင်း | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar | Car News, Forums, Reviews, Discussions
Home » News » ယာဉ်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် Toyota ကုမ္ပဏီမှ US ထုတ် RAV4 ကား 760,000 ကျော်၊ Lexus HS 250h ကား 18,000 ကျော် ကို ပြန်လည်အပ်နှံရန်ခေါ်ယူခြင်း
admin | News | August 2, 2012
မြန်မာပြည်တွင်လည်း RAV4s များ အင်မတန်လူကြိုက်များကြောင်း ကျွန်တော်တို့သိရပါသည်။ သို့သော် ကားအများစုမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှသွင်းထားခြင်းဖြစ်၍ ဤသတင်းကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြဖြစ်ရန်မလိုပါ။ သို့သော် – သင်၏ RAV4 သို့မဟုတ် Lexus HS250h ကို အမေရိကန်မှ သွင်းခဲ့သည်ဆိုလျှင်တော့ စိတ်ပူရမည့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
2,168 total views,3today Print
12 Responses to “ယာဉ်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် Toyota ကုမ္ပဏီမှ US ထုတ် RAV4 ကား 760,000 ကျော်၊ Lexus HS 250h ကား 18,000 ကျော် ကို ပြန်လည်အပ်နှံရန်ခေါ်ယူခြင်း”
Pyae Sone Aung on August 2, 2012 @ 4:32 pm တော်ပါသေးရဲ့ ဂျပန်ကသွင်းမိလို့
Reply Leo Phoenix on August 2, 2012 @ 5:52 pmး-)
Reply Moe Myint Moe on August 3, 2012 @ 8:41 am ဂျပန်ကနှစ်လွန် လမ်းပေါ်မသွား၇ကားကိုသွင်းထားတာပါကွာ ၊လုပ်မနေပါနဲ့
Reply Hann Lynn Maung on August 3, 2012 @ 7:59 am nevermine becauseof , I have not any car.
Reply Zawzaw Htun on August 3, 2012 @ 10:42 pm ငါလဲ RAV4 2011 ၀ယ်မလို့ ထီမပေါက်ဘူးဖြစ်နေတယ်.
Reply Moe Myint Moe on October 17, 2012 @ 4:30 am ထီပေါက်၇င်တောင်ကားဝယ်မစီးဘူး၊မတန်လို့၊ နို့တွေချည်းဝယ်သောက်ပစ်မယ်၊နာကနို့အပြတ်သေးဘူး
Reply Kyaw Win Htut on August 5, 2012 @ 7:57 am ဒီမှာ စီးနေတဲ့ RAV4တွေက 99 နဲ့ 2000 တွေဘဲ များပါတယ်.
Reply Ve No Gyi on August 5, 2012 @ 12:28 pm တော်သေးတယ် ဂျပန်က ၀ယ်ထားလို့။တိုယိုတာ လိုဂို။.
Reply Myo Thu Htun on August 7, 2012 @ 11:45 am thz for the informatin..
Reply Htet Aung on August 10, 2012 @ 7:08 pm ဘာကား ပဲပြန်ခေါ်ခေါ် မြန်မာပြည်က ကားနှင့် ၉၉% မသက်ဆိုင်ပါ၊ မြန်မာတွေ စီးနေကြသောကားသည် ဂျပန်တွင် used car များဖြစ်သည် ၊အသစ်ဟု ထင်နေကြသော ကားဟောင်းများဖြစ်သည်။။ Warranty မရှိသော De registered car များဖြစ်သည်။ သင့်တွင် Warranty မရှိပါက အကျုံးမ၀င်ပါ။ လေလံတွင် ကြည့်ပါ၊ တိုက်ထားသောကား အပျက်တွေကိုတောင် လေလံ ဆွဲနေကြသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကားအသစ်ကို Warranty ဖြင့် ၀ယ်ထားပါက အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုလူမျိုးတချို့ မြန်မာပြည် တွင်ရှိပါသည်။.
Reply Htet Aung on August 10, 2012 @ 7:37 pm Older vehicles
ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများHILUX SURF SSR(G) (95 views)2007 (91 views)CHEVROLET MW (82 views)HONDA, INSIGHT HYBRID 2009, 138 သိန်း (အလျှော့အတင်းမရှိ) (82 views)Toyota Hilux Double Cab Pick Up 1020kg 4WD TD GX Diesel 2001 (76 views)Toyota Passo (75 views)Isuzu Rodeo DCAB PICKUP 3.0L 2004 (73 views)Isuzu Rodeo 3.0TD DENVER DOUBLE CAB 4X4 4dr 2003 (65 views)super saloon (65 views)Bmw 318i also available for exchange (60 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar | Car News, Forums, Reviews, Discussions. All Rights Reserved.